Mbatata inotapira uye machizi echizi | Bezzia
Sweet potato uye cheese macroquettes
Maria vazquez | 27/04/2021 10:00 | Kutanga
Patakaona izvi mbatatisi uye machizi echizi mune chimiro cheiyo chiremba wezvekudya-chikafu Raquel Bernacer taiziva kuti taifanirwa kuvagadzirira kumba. Zvino tinozozviwana tiine dambudziko chairo: handina zvakakwana izvi kana ini handiwanzoshandisa chinhu ichi mukicheni mangu ... asi zvese zvine mhinduro!
Aya macroquette haadi kugadzirira bechamel kuti ishandise senge echinyakare. Iyo bundu inogadzirirwa nekubatanidza nyama yakakangwa inotapira, chizi, kirimu uye gelatin, pakati pezvimwe zvinoshandiswa. Jelly? Unogona kuzvisiya asi uchawana sei nguva yekutarisa mukanyiwa hausi nyore kubata kunyangwe kurishandisa.
Iyo nguva yekuumba macroquettes ndiyo yakanyanya kusimba. Kugadzira mukanyiwa uri nyore kwazvo, asi mushure mekutendera kuti ugare mufiriji, inguva yekugadzirira macroquettes. Uye iwe haugone kuzvigadzira nemaoko ako, senge echinyakare. Iwe unozoda zvipunu zviviri uye kumwe kutsungirira kuti uzviite. Iye zvino iye inotapira kuravira uye yakasviba kugadzirwa yemakoroketi ivo vanougadzira kupfuura.
385 g. nyama yakakangwa inotapira (1 mbatatisi hombe)
1 pepa rekusarerekera gelatin
60 ml. kirimu ine 35% mafuta
Pepper nhema kuravira
55 g mozzarella chizi (yakagurwa uye yakanyoroveswa)
Mamwe mhandara yemafuta emuorivhi
Roast mbatata. Kuti uite izvi, preheat oven kusvika 200ºC, geza mbatatisi musvinu woiisa pakaoma pateyi yehovhoni, yakazodzwa nemafuta emuorivhi mashoma. Bika 45 min kana kusvika wapedza. Wobva watora kubva muchoto uye rega itonhorere pasi.
Sezvo inotonhora, inodiridza gelatin mundiro ine mvura inodziya kwemaminetsi mashoma.
Panguva imwecheteyo, pisa kirimu muhombodo pasina kuitendera kuti ibike. Kana uchinge wapisa, bvisa kubva pamoto, wedzera gelatin uye sanganisa kusvikira yaparara uye yabatanidzwa.
Kamwe mbatata painodziya, bvisa pulp woisa huwandu hwakaratidzwa mundiro, uchipwanya neforogo.
Wedzera iyo yakanyunguduka mafuta, kirimu ine gelatin, chizi uye mwaka wekuravira. Sanganisa mushe, edza kana uchifanira kugadzirisa poindi yemunyu uye kuiisa mufriji kweawa, ichivhara ndiro neplastiki.
Nguva yakafamba, gadzira macroquettes uchishandisa zvipunu zviviri. Wobva wadzipeta zvinyoro muhupfu, zai rakarohwa, uye zvingwa zvechingwa. Zviise mufriji kweimwe awa usati wazvipisa.
Finalmente Fry the croquettes mune yakawanda mafuta kupisa mumabatch, uchibvumira mafuta akawandisa kudonha pamapepa anopinza sezvaunobvisa.
Shumira iyo inotapira inotapira uye chezi croquettes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Kutanga » Sweet potato uye cheese macroquettes
5 mhando dzemagirazi ekupedzisa tafura yako
Zvinoita here kuchengetedza hushamwari hukama newawakaroorana naye?